RealThadin - Page 178 of 200 - News and Media
ကိုဗစ် – ၁၉ လူ နာ များ ကို ဖောင်ကြီးေ ဆးရုံး မှာ ရှေ့ဆုံး ကနေ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ့် ဆရာဝန်ကြီးပါ
April 18, 2020 RealThadin 0
မြန် မာနိုင်ငံ တွင် ကြုံတွေ့လာရနိုင်သည့် Covid-19 လူနာများကို ကုသနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေကြရာဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်( ဖောင်ကြီး)ကို Covid-19 ကုသရေးဆေးရုံအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့မှုလည်း ပါဝင်ပြီး အဆိုပါဆေးရုံကြီးကို လက်ရှိဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်၏ ဆေးပညာပါမောက္ခ/ဌာနမှုး ဒေါက် တာဇော်လင်းအောင်က ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ လက် ရှိ […]
ချစ်သူ နဲ့ အဆင့်ကျော်ပြီး ၄ နှစ်လုံး အ တူတူနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ အေသင်ချိူဆွေ
ပ ရိသတ်တွေ လက်ခံအားပေးထားတဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေကတော့ လက်ရှိချိန်မှာ အချစ်ရေးမှာကံအကြောင်းမလှခဲ့တာကြောင့် Single Mother တယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေသင်ချိုဆွေကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ Single Mother တွေကိုလည်း အားပေးစကားတွေ များစွာပြောကြားခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ဓါတ်ပိုင်းမှာ ပြင်ဆင်နေရလည်းဆိုတာတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ […]
ငအိုးမြို့ကနေ မန္တလေးကို ၆ ရက်ကြာခြေလျင်လျှောက်လာခဲ့ရတဲ့ မိသားစု ၄ ဦး
ငအိုးမွို့ကနမေန်တလေးကို ၆ ရကျကွာခွလေငျြလြှောကျလာပွီး နရေပျဖွဈတဲ့ သာစညျမွို့နယျ၊ ယငျးမာပငျရှာကိုပွနျဖို့ လိုငျးကားတှမေရှိလို့ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ကလေးနဲ့ မိသားစုကို ကမျးနားလမျး ကုနျစိမျးစြေးနားမှာ ကူညီပေးဖို့ မန်တလေးမွို့(ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး) ကိုဝမျး တို့အဖှဲ့မှာ သှားေ ရာကျတှဆေုံ့ခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။ အဆိုပါ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ သားအမိ သား အဖ(၄)ဦးကိုနရေပျပွနျပို့ပရေနျအတှကျ […]
လူ တစ်ထောင်ကျော် ကိုရိုနာ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ ရောဂါစမ်းသပ်ကိရိယာတွေ ကိုရီးယားက မြန်မာကိုလှူ
လူ တစ်ထောင်ကျော်လောက်ကို စမ်းသပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ရေးကိရိယာ Test kit တွေကို ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပေါ်စကိုအင်တာနေရှင်နယ်က မြန်မာအစိုးရကို ဒီကနေ့ ဧပြီ ၁၈ ရက်မှာ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အာဆီယံအပေါင်းသုံး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြားခဲ့တဲ့ ထဲက မိတ်ဖက်များရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုဆိုတဲ့ စကားနဲံအညီ […]
ဆွမ်းခံခဲ့တဲ့ လက်တွေကနေ ဆွမ်းဆန်ဝေတဲ့ လက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ …
ဆွမ်းခံခဲ့တဲ့လက်တွေကနေဆွမ်းဆန်ဝေတဲ့လက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီ အရှေ့ဒဂုံ တိပိဋကမဟာဂန္ထဝင်နိကာယ်စာသင်တိုက်သံဃာတော်များရဲ့တပိုင်တနိုင်အလှူပါတဲ့.. ပုံမွန္ဆို ဒကာဒကာမေတြလှူဒါန်းတဲ့ဆွမ်းကိုဘုဉ်းပေးခဲ့ရတဲ့ ဆရာတော်သံဃာတော်များဟာခုလိုဒကာဒကာမေတြ covid-19ဆိုတဲ့ ကပ်ဆိုးနဲ့ တွေ့ကြုံနေရချိန်မှာအိမ်တိုင်ရာရောက်သွားရောက်ပြီး ဒကာဒကာမတွေကို ပြန်လည်စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းပေးကမ်းနေကြတာမြင်ရတော့အတိုင်းမသိကြည်နူးဝမ်းသာမိတယ်။ Credit အရှင်ဝိမလာလက်ာရ ဦးခိုက်ပူဇော်ပါသည်။ unicode version ဆှမျးခံခဲ့တဲ့လကျတှကေနဆှေမျးဆနျဝတေဲ့လကျတှဖွေဈကုနျပွီ အရှဒေ့ဂုံ တိပိဋကမဟာဂန်ထဝငျနိကာယျစာသငျတိုကျသံဃာတျောမြားရဲ့တပိုငျတနိုငျအလှူပါတဲ့.. ပုံမှန်ဆို ဒကာဒကာမတွေလှူဒါနျးတဲ့ဆှမျးကိုဘုဉျးပေးခဲ့ရတဲ့ ဆရာတျောသံဃာတျောမြားဟာခုလိုဒကာဒကာမတွေ covid-19ဆိုတဲ့ ကပျဆိုးနဲ့ တှကွေုံ့နရေခြိနျမှအိမျတိုငျရာရောကျသှားရောကျပွီး […]
Stay at Home အစီစဉ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်ကို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ကြေငြာ
ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ အမိနျ့အမှတျ (၃၈/၂၀၂၀) ကို ယနရေ့ကျစှဲဖွငျ့ ထုတျပွနျ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ၃၈/၂၀၂၀ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၁၈ ရက်) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေ […]
Case 87 62 နှစ် အတည်ပြု့လူနာနဲ့ထိတွေ့မှု့မရှိ/ပြည်ပခရီးသွားမှု့မရှိ.
Case 87 62 နှစ်(အတည်ပြု့လူနာနဲ့ထိတွေ့မှု့မရှိ/ပြည်ပခရီးသွားမှု့မရှိ) တာမွေ..ကျောက်မြောင်း.မီးပွိုင့်အနီးကျိုက္ကစံလမ်း..ဗလီဝန်း နတ်မောက်ရပ်ကွက်..ထ.၄ ကျောင်းဝန်းနားပိုးတွေ့လူနာအမျိုးသား.အိမ်နဲ့.ပတ်ဝန်းကျင်..အဖွဲ့စုံဖြင့်…ဆေးဖြန်း.. ဂရုစိုက် ကြပါတော့…လော့ဒေါင်းလဲချပါတော့မယ်..နတ်မောက်ရပ်ကွက်.. Credit Shwe San unicode version Case 87 62 နှဈ(အတညျပွု့လူနာနဲ့ထိတှမှေု့မရှိ/ပွညျပခရီးသှားမှု့မရှိ) တာမှေ..ကြောကျမွောငျး.မီးပှိုငျ့အနီးကြိုက်ကစံလမျး..ဗလီဝနျး နတျမောကျရပျကှကျ..ထ.၄ ကြောငျးဝနျးနားပိုးတှလေူ့နာအမြိုးသား.အိမျနဲ့.ပတျဝနျးကငျြ..အဖှဲ့စုံဖွငျ့…ဆေးဖွနျး.. ဂရုစိုကျ ကွပါတော့…လော့ဒေါငျးလဲခပြါတော့မယျ..နတျမောကျရပျကှကျ.. Credit Shwe […]
စမ်းချောင်းမှာ Positive တစ်ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ..
“စမ်းချောင်းမှာ Positive တစ်ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ” စမ်းချောင်းမြို့နယ်နေ တစ်ဦး ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိပါသည်။Case-92 မှာ စမ်းချောင်းမြို့နယ် လင်းလွန်းမြောက်ရပ်ကွက်၊အမှတ် ၁၇ (၅)လွှာ (ဝဲ) သရက်တောလမ်းနေ အသက် ၂၄ နှစ် အရွယ်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးအတူနေ အဒေါ် နှင့် အမျိုးသားတစ်ဦး တို့ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ပိုးတွေ့သူအမျိုးသားမှာ […]
တစ်နပ် ၁၀၀ ဖိုးသာ စားရရှာတဲ့ အသက် ၉၀ ကျော်အဖွားအိုရဲ့ သနားစရာဖြစ်ရပ်.
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ဘဝဟာ တကယ့်ကို ဆိုးလှတာပါ….ကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက် ဆို ပိုဆိုးပါတယ်…ခုလည်းပဲ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့ အသက် ၉၀ အဖွားတစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးက ကြေကွဲဖို့ကောင်းလှပါတယ်….. ထမင်း ၁၀၀ ဖိုးတည်းနဲ့ တနေကုန်စားသောက်ရရှာတဲ့ အဘွားရဲ့ စိတ်မကောင်းဖွယ် အကြောင်းလေးကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ခုလိုဖော်ပြထားကြတာပါ“စာဝါသွားရင်း လမ်းမှာ အဘွားအိုတွေ့တာနဲ့ အဘွားအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလည်းမေးကြည့်တော့ ၉၀ရှိပြီတဲ့ […]
ထပ်တိုးလူနာ ၉ ဦး စာရင်း ထုတ်ပြန် ရောဂါပိုးအတည်ပြုလူနာ ၉၄ ဦးရှိပြီ
၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) သည် (၁၇-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ပေးပို့လာ သော စောင့်ကြည့်လူနာ (၁၇၇) ဦးနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း/ တားမြစ်ခြင်း ဆောင်ရွက် ထားရှိသူ (၂၀၁) ဦးတို့၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများ စုစုပေါင်း (၃၇၈)ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တွင် […]